Geothermal grajentị: ihe ọ bụ, njirimara na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
O siri ike iche na ị nwere ike gbakọọ ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ụwa. Ourwa anyị nwere omimi dị kilomita 6.000 ruo mgbe o ruru n’isi. N'agbanyeghị nke a, mmadụ eruola omimi nke 12 km. Otú ọ dị, anyị nwere usoro dị iche iche iji nwee ike ịgbakọ ọnọdụ okpomọkụ na omimi. Mgbanwe nke okpomọkụ n’usoro banyere omimi nke jikọrọ ọnụ ụwa mara site na geothermal grajentị.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile na mkpa nke grajentị gị.
1 Kedu ihe gradient geothermal dị
3 Igba na mgbasa nke okpomọkụ ụwa
4 Omimi na uzo ozo nke gradient
Kedu ihe gradient geothermal dị
Ihe a na-eme ka mmiri na-egbuke egbuke ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa okpomọkụ variance dị ka ọrụ nke omimi na anyị na-ahụ onwe anyị. Enwere ike tụọ okpomọkụ na kilomita mbụ nke eriri ụwa ma ha abawanye na omimi na-agbaso mgbatị nke ogo 3 maka mita 100 ọ bụla nke omimi. A na - akpọ mmekọrịta dị n'etiti mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ na omimi nke gradient geothermal. Eke okpomọkụ nke ụwa bụ ihe dị iche na usoro kemịkalụ na-eme n'ime. E nwekwara ihe ndị ọzọ na-abanye na akara a ka ha nwee ike gbakọọ ọnọdụ okpomọkụ ahụ.
Ka anyị lee ihe dị iche iche na-emetụta ọnụọgụ gradient dị na mbara ala:
Ihe gbasara mpaghara: mpaghara anyị si gburugburu ụwa dị mkpa iji mata ọdịiche nke ọnọdụ okpomọkụ ahụ. Ọnọdụ ala na nhazi na mpaghara mpaghara bụ otu n'ime ihe na-edozi nkesa nke okpomọkụ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, n’ebe e nwere ugwu mgbawa na-arụ ọrụ taa, ebe lithosphere na-ebelata, gradient dị larịị dị elu karịa mpaghara ndị ọzọ na-anaghị arụ ọrụ mgbawa ma ọ bụ ebe lithosphere nwere oke dị iche.
Ihe mpaghara: na a ọtụtụ ihe ndị ọzọ na mpaghara anyị na-ahụ iche n'etiti thermal Njirimara nke nkume. E nwere nkume nke nwere nrụpụta ọkụ dị elu nke na-ewepụta mmetụta dị nro na ntanetị dị iche nke gradient gramaent kwuru. Ihe na - ekpebi uru nke gradient a dị na mmiri bụ nrugharị mmiri dị n'okpuru ala. Ihe a bụ na mmiri nwere nnukwu ikike iji nwee ike ịkesa okpomọkụ. Nke a bụ otu anyị si achọta ebe aquifer na-agbanye ọkụ nke gradient gradient na-ebelata n'ihi nrugharị nke mmiri oyi.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ụfọdụ ebe ana - ebudata ebe ndị ọzọ na - eme. Nrị elu nke mmiri ọkụ na omimi na-eme ka ikuku mmiri dị na mbara ala mụbaa. Ya mere, uru nke gradient geothermal ga-ewere dịgasị dabere na usoro ala na nhazi, ọdịiche dị n'etiti teknụzụ teknụzụ na mgbasa nke mmiri mmiri. Ihe ndị a niile bụ ihe na-eme ka mmụba a na ọnọdụ okpomọkụ dị iche na omimi.
Igba na mgbasa nke okpomọkụ ụwa
Anyị maara na okpomoku nke ụwa anyị na-ebute na-enwe ike ịgụta ọnụ site na oke okpomọkụ sitere na mbara igwe. Nke a bụ oke okpomoku nke ụwa na-efufu kwa otu mpaghara na oge. A na-agbakọta usoro okpomọkụ dị elu dị ka ngwaahịa nke gradient geothermal na arụmọrụ thermal nke ọkara. Nke ahụ bụ, uru nke graferụ dị elu na-amụba site na ike iduzi okpomọkụ na gburugburu ebe anyị nọ. Nke a bụ otu anyị si mara mkpokọta ọkụ ọkụ na-adị n'otu mpaghara.
Igwe na-ekpo ọkụ bụ ịdị mfe nke ihe iji nwee ike ibufe ọkụ. Otu ihe bara uru nke oku oku na kọntinent bu 60 mW / m2, nke nwere ike ịdaba na ụkpụrụ nke 30 mW / m2 na mpaghara kọntinent ochie - ebe lithosphere dị ike - ma gafee ụkpụrụ nke 120 mW / m2 na mpaghara ndị na-eto eto, ebe lithosphere pere mpe. Ọ dị mfe ịlele na mines na olulu mmiri, ọnọdụ okpomọkụ nke ihe ndị dị n'ime ụwa na-abawanye site na omimi.
E nwere ọtụtụ olulu mmanụ nke ụkpụrụ ruru ogo 100 ruru ihe dị ka mita 4.000 nke omimi. N'aka nke ọzọ, na mpaghara ebe ugwu na-agbọpụ ọkụ, a na-ebute ihe dị iche iche n'elu ụwa site na okpomọkụ dị elu nke na-esite n'akụkụ ndị ka ukwuu. Akụkụ nke ụwa jikọrọ ọnụ gafere centimita ole na ole n'ogologo. Ihe ejiri mara ya bu na okpomoku ya dabere na okpomoku di ugbua ma gosiputa otutu oku diaries na oge. Mmetụta nke okpomọkụ dị na mpụga na-emetụta obere ihe ka anyị na-abanye omimi.
Mgbe anyị ruru ogo dị omimi, okpomọkụ dị mgbe ọ bụla na nkezi nke okpomọkụ dị elu nke ebe ahụ. Nke a na mpaghara a na-akpọ ndị na-anọpụ iche larịị mgbe nile okpomọkụ ozone.
Omimi na uzo ozo nke gradient
Omimi nke achọpụtara larịị na-anọpụ iche ebe okpomọkụ na-adị mgbe niile na-adịkarị n'etiti 2 na 40 mita. Ọ kachasị njọ karịa ihu igwe nke na-agbasasị n’elu ụwa. N'okpuru ịnọpụ iche bụ ebe okpomọkụ na-amalite ịbawanye na omimi. Mmụba a abụghị otu n'akụkụ niile. Na nke mbụ, ọ dị elu karịa nke ụwa, ọnụ ọgụgụ dị elu nke gradient geothermal bụ ihe dị ka mita 33. Nke a pụtara na ị ga-aga mita iri atọ na atọ iji nwee mmụba ogo 33 na ọnọdụ okpomọkụ. N'ihi ya, E guzobere ya n'etiti gradient geothermal dị ogo 3 na mita 100 ọ bụla.
Averagekpụrụ dị na ya na-emetụta naanị mpaghara ndị dị na mpụga, ebe ọ nwere ike ịchekwa ya na radius niile. Na omimi ka ukwuu okpomọkụ dị elu karịa na ihe ndị ahụ gbazee na omimi nke naanị narị narị kilomita.
Taa anyị maara na ọtụtụ ndị ọkà mmụta banyere mbara ala na-eme atụmatụ na oke okpomọkụ n’ime ime elu ala akarịghị puku puku ole na ole. Ọtụtụ, ụfọdụ na-eme atụmatụ ụkpụrụ nke ihe dị ka 5.000 degrees. Ihe ndị a niile na - eduga na grajentị dị larịị na - agbadata site na omimi ozugbo ejiri ruru oke ala.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu ihe gradient gradentị bụ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Geothermal grajentị